अभिनेत्री नीता ढुंगाना र ज्योतिष हरिहर अधिकारी डेटिङका लागि भारतमा ! सार्वजनिक भयो यस्तो तस्बिर (भिडियो हेर्नुस्) « Gaunbeshi
काठमाडौं । नेपाली फिल्म क्षेत्र गसिपका एउटा राम्रो वजार हो । कला क्षेत्रमा रहेकाहरुका बारेमा विभिन्न किसिमका गसिप बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी हुने भनेको कलाकारको प्रेम र सम्बन्धका बारेमा हो । कलाकारको ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा सर्वसाधारणलाई धेरै चासो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्तो गसिप धेरै चर्चीत हुन्छन् । अनेक अड्कलवाजी गरिएका गसिप चल्ने गरेका छन् ।
हप्तै पिच्छे आउने यस्तो गसिप कति सत्य हुन्छ त कति हल्ला मात्र हुन्छ । नायीका निता ढुंगानाको प्रेमको फेरी चर्चा हुन थालेको छ । अहिले उनको प्रेमको चर्चा चर्चीत ज्यातीष हरिहर अधिकारीका साथमा रहेको गसिप सुरु भएको छ । हरिरह नायक पनि हुन् ।
काठमाडौं । अनुष्का शर्मा र विराट कोहलीकी छोरी वामिकाको फोटो हालै मात्र सोसल मिडियामा
बिहेपछि पहिलो पटक बिकिनीमा देखिईन कट्रिना कैफ, फ्यानले सोधे यस्ता प्रश्न, हेर्नुहोस्
मुम्बई। कट्रिना कैफको विवाह भएको डेढ महिना बितिसकेको छ । विवाहपछि अब कट्रिना फेरि
मनोज गजुरेललाई दोस्रो पटक कोभिड पुष्टि, कस्तो छ उनको अवस्था ?
काठमाडौ । हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई दोस्रो पटक कोभिड पुष्टि भएको छ । उनी पहिलो